Hadal jeedinta maalina koowaad ee Musharaxiinta Madaxweynaha 10aad JFS oo la soo gabagabeeyay – Radio Muqdisho
Waxaa maanta Xarunta Teedhada Afisyooni ka qabsoontay hadal jeedinta Musharaxiinta u taagan qabashada Xilka Madaxweynaha 10aad ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya, halkaas oo ay ku soo bandhigayeen Barnaamij Siyaasadeedka Musharaxiinta Madaxweynaha Soomaaliya.
Maalinta koowaad ee Hadal jeedinta waxaa ku qornaa illaa 20 Musharax oo ka mid 39 musharax oo si rasmi ah u dhameystiray sharuudaha musharaxnimo ee Xilka Madaxweynaha Soomaaliya, kuwaas oo uu Guddiga u jaan gooyay in ay u soo bandhigaan ajandayaashooda Mudanaasha Golaha Aqalka Sare iyo Golaha Shacabka Baarlamaanka Federaalka Soomaaliya.
Munaasabadda hadal jeedinta ayaa waxaa Goobjoog ka ahaa Guddoomiyaha Golaha Shacabka BFS Sheekh Aadan Maxamed Nuur Madoobe, Guddoomiyaha Golaha Aqalka Sare Senator Cabdi Xaashi Cabdullaahi iyo ku xigeennada Guddoonka labada Aqal ee BFS.
Ugu horreeyn Guddoomiyaha Guddiga isku dhafka ah ee doorashada Madaxweynaha Soomaaliya Senator Cabdiqani Geelle Maxamed ayaa daah furay kulanka, asaga oo mudanayaasha iyo musharaxiinta u sharaxay habraac hadal jeedinta Musharaxiinta.
Hadal jeedinta Musharaxiinta marka ay soo idlaatay ayaa Guddoomiyaha Guddiga Doorashada Madaxweynaha 10aad ee JFS ka codsaday Xildhibaannada labada Aqal ee BFS in ay ka soo qeyb galaan hadal jeedinta Musharaxiinta ee loo ballan sanyahay maalinta berri oo ah maalinta u dambeysa ee hadal jeedinta musharixiinta ku loolamaya xilka Madaxweynaha Soomaaliya.
Doorashada Madaxweynaha 10-aad ee JFS ayaa lagu wadaa in ay dhacdo 15 May 2022 oo ku beegan maalin Axadda ee soo aadan oo ah maalinta ay u jaangooyeen Guddiga Doorashada Madaxweynaha 10aad ee Soomaaliya.
Cutubyo ka tirsan Ciidanka Daraawiishta oo tababar loogu soo xiray Dalka Jabuuti “SAWIRRO”